PCCW Global immersive 360-ဘွဲ့, သဟဇာတအတူ VR အားကစားအတွေ့အကြုံဘဝမှကယျတငျ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Eliud Kipchoge နှင့်အတူ Ineos 159 စိန်ခေါ်မှုမာရသွန်ပြေးသည်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အတွက် Dynamic Production Gallery ကိုဖန်တီးရန် LiveU ကိုအသုံးပြုသည်။
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » PCCW Global immersive 360-ဘွဲ့, သဟဇာတအတူ VR အားကစားအတွေ့အကြုံဘဝမှကယျတငျ
PCCW Global immersive 360-ဘွဲ့, သဟဇာတအတူ VR အားကစားအတွေ့အကြုံဘဝမှကယျတငျ
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဧပြီလ 22, 2017 -- သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT), ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်, ယနေ့ 360, ဗီဒီယိုစနစ်က VS က၎င်း၏ Electra (TM) စွဲငြိဖွယ်ရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ PCCW Global, HKT, ဟောင်ကောင်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေး၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုကွဲပြားခြင်းကအသုံးပြုကြောင်းကြေညာခဲ့သည် -degree virtual reality (VR) အတွေ့အကြုံများကိုအဆိုပါ 2017 Cathay ပစိဖိတ် / HSBC ကဟောင်ကောင်ခုနစ်ယောက်အဖွဲ့ရပ်ဂ်ဘီပြိုင်ပွဲကိုဧပြီလ 7-9 စဉ်အတွင်းနေထိုင်ကြသည်။ စံပြစနစ်များ, 360 ဒီဂရီ VR multicamera တိုက်ရိုက်အားကစားထုတ်လုပ်မှု၏ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အတူကူညီအာရှ၏အကြီးဆုံး, စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်။ Nokia က OZO ကင်မရာများပါဝင်သည့်အပြည့်အဝပေါင်းစည်း VR လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်အတိုင်း, Electra VS ချုံ့ပလက်ဖောင်း PC များ, စမတ်ဖုန်းနှင့် Samsung Gear VR ခေါင်းကို-တပ်ဆင်ထား devices များ (HMDs) အပါအဝင်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးပေါ်တွင်စားသုံးသူမှ UHD VR အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့ PCCW Global enabled ။
"တိုက်ရိုက်အားကစားဖြစ်ရပ်များကြည့်ရှုသူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်အဖွင့်ဖွင့်အကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးအသစ်ငွေရှာခြင်းအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေတိုးပွားလာ, VR နည်းပညာများအတွက်အလားအလာအကောင်းဆုံးဗီဒီယိုက applications များထဲကတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း," တိုနီ Berthaud မှာရောင်းအား၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌပွေးကပြောသည် သဟဇာတ။ "PCCW Global နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ VR နည်းပညာမိတ်ဖက်နှင့်အလုပ်လုပ်ကျနော်တို့ခြွင်းချက် UHD အရည်အသွေးမြင့်အတွက်ပွဲစဉ်များတစ်ဦးချင်းစီသည်ထောင့်မိတ်ဆက်, ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးရပ်ဂ်ဘီကစားသမားအချို့ကိုဆွဲဆောင်သောဤ Premiere ဖြစ်ရပ်မှအားကစားပရိသတ်တွေသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ "
အဆိုပါ 360 ဒီဂရီ VR လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်, postproduction အဘို့ကို Adobe Premiere နှင့်အတူပေါင်းစည်း Nokia က OZO VR ကင်မရာများ featured သဟဇာတ UHD ချုံ့ Electra VS စနစ်, နှင့်စံပြတိုက်ရိုက် 360, ဂီယာ VR နားကြပ်တစ်ခု VR လျှောက်လွှာနှင့်တစ်ဦး cloud-based VR သရုပ်ခွဲ backend ဝန်ဆောင်မှုပါဝင်သောအဖြေတစ်ခုစံပြစနစ်များကပူးတွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ Electra VS system ကိုအသုံးပြုခြင်း, PCCW Global ဟောင်ကောင်ခုနစ်ယောက်အဖွဲ့ပြိုင်ပွဲ၏ကြည့်ရှုမည်သည့် device ကိုအပေါ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 360 ဒီဂရီ, VR ပုံရိပ်ယောင်ခံစားသေချာ, Dash UHD ABR, AVC နှင့် HEVC အပါအဝင်မျိုးစုံ profile များကိုနှင့်ပုံစံများသို့တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုဝှက်နိုင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန် in သဟဇာတ တဲ SU1210, ကုမ္ပဏီ Las Vegas မှာအဆိုပါ Luxor Hotel နှင့်ကာစီနိုမှာသူတို့ရဲ့စင်မြင့်ကနေအပြာရောင်က Man Group ၏ prerecorded အကြောင်းအရာ featuring တစ်ဦးဆန္ဒပြပွဲနှင့်အတူ 360 ဒီဂရီစွဲငြိဖွယ်ရာ VR နည်းပညာဖြတ်တောက်-အစွန်းတီထွင်မှုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ သဟဇာတ နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင် www.harmonicinc.com.
သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT) ထွန်းသစ်စရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုန်ဆောင်မှုများအတွက်ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သဟဇာတ ဖောက်သည်ဈေးကွက်-ဦးဆောင်တီထွင်ဆန်းသစ်မှု, အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်-of ပိုင်ဆိုင်မှုပေးအသုံးပြုပုံမတူညီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသွက်လက်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှုနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်သောဗီဒီယိုအတွေ့အကြုံများ, ထုတ်လုပ်ရန်ကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်မှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.harmonicinc.com.
အယ်ဒီတာ'S မှတ်ချက် - ဤနေရာတွင်အသုံးပြုသောကုန်ပစ္စည်းနှင့်ကုမ္ပဏီအမည်များကိုအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
အလည်အပတ် သဟဇာတ အဆိုပါ 2017 မှာ NAB ပြရန်, Booth SU1210
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/[အီးမေးလျ protected]%20Pushes%20%23OTT%20QoE%20to%20New%20Heights,%20Brings%20Market-Leading%20Playout%20Capabilities%20to%20%23VOS%20at%202017%20%23NABShow%20-%20https://goo.gl/1wGm57
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/Harmonic/သဟဇာတ-PCCW_VR_Rugby_Event.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: PCCW Global immersive 360-ဘွဲ့, အတူ VR အားကစားအတွေ့အကြုံဘဝမှကယျတငျ သဟဇာတ
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဟဇာတ ဟက် စံပြစနစ်များ isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော တိုက်ရိုက်လွှအကြောင်းအရာ NAB16 Nokia PCCW UHD virtual reality	2017-04-26
ယခင်: သဟဇာတပု 2017 NAB Show မှာနယူးမြင့်မှ OTT QoE တွန်း
နောက်တစ်ခု: သဟဇာတ VOS (TM) တိမ်တိုက်နှင့် VOS 360 Solutions မှ Market က-ဦးဆောင်ပလေးအောက်ကိုစှမျးဆောင်ကြဉ်း
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး / အကောင့်အလုပ်သင်